Kwiminyaka Yakhe Yokuqala
URae Carruth wazalwa ngoJanuwari 1974, eSigramento, eCalifornia. Njengomntwana nakwishumi elivisayo, wayebonakala ejolise kuyo; wayefuna ukuba ngumdlali webhola. Wayesesikolweni esiphakeme i-All-American kwaye ethandwa ngabantu afunda nabo. U-Academically wayenzima, kodwa ekugqibeleni wayinqoba i-sports scholarship ekolishi.
Umsebenzi wakhe webhola:
UCarruth waqashwa njengomntu owamkela kwiYunivesithi yaseColorado ngo-1992.
Ngoxa wayesekho, wagcina iqondo lakhe eliqhelekileyo kwaye wayengenayo imiba yoluleko. Ngo-1997, i-Carolina Panthers ikhethe iCarruth kwiprothiyiti yokuqala yokuqala. Xa eneminyaka engama-23 ubudala, watyikitya isivumelwano seminyaka emine se-$ 3.7 yezigidi njengomkeli wokuqala oqalayo. Ngo-1998, ngexesha elilodwa nje ngaphantsi kwebhanti lakhe, waqhekeza unyawo lwakhe. Ngowe-1999, wanyusa i-ankle kwaye kwakukho amahemuhemu ukuba wayeba ngumthwalo kwi-Panthers.
Indlela yakhe yokuphila:
URae Carruth wabaninzi abafazi. Ngezezimali, izibophelelo zakhe zaqala ukudlula imali engenayo yenyanga. Wayelahlekelwa ngumntu oneminyaka engama-3,500 ngenyanga. Wenza utyalo-mali. Imali yayinzima kwaye yalimala, ikusasa lakhe lithinteka kuye. Kwakulo xesha afunda u-Cherica Adams oneminyaka engama-24 ubudala, ukhulelwe ngumntwana wakhe. Ulwalamano lwabo lwachazwa njengento engaqhelekanga kwaye uCarth akazange ayeke ukuthandana namanye amabhinqa.
UCerrica Adams wakhula e-Kings Mountain, eNorth Carolina ekugqibeleni waya endaweni eCharlotte. Kulapho waya kwikholeji iminyaka emibini waza waba ngumdaniso oyingqayizivele. Wadibana noCarruth kwaye bobabini baqala ukuphandana ngokungaqhelekanga. Xa ekhulelwe, uCarruth wamcela ukuba akhuphe isisu, kodwa akazange avume.
Intsapho yakhe yathi wayenomdla ngokuba nomntwana, ukhetha igama likaKhansela kumntwana ongakazalwa. Watshela abahlobo, ukuba emva kokuba uCarruth ahlunguze i-ankle yakhe, waba kude.
NgoNovemba 15, 1999, u-Adams noCarruth badibana nomhla. Lo wawungowomhla wabo wesibini kuphela ukususela ekubeni i-Adams yazisa uCarruth kokukhulelwa kwakhe. Baya kwi-movie ye-9: 45 ntambama kwiRegal Cinema eMzantsi Charlotte. Xa ifilimu iphelile, bahamba kwiimoto ezahlukileyo kunye neAdam elandelwa emva kweCarruth. Ngethuba lemizuzu yokushiya i-cinema, imoto yahamba yecala kunye ne-Adams kunye nomnye wabahlali baqala ukudubula ngokukhawuleza. Wayebethelwa ngamabhola amane kumqolo wakhe, awonakalise izitho ezibalulekileyo.
Ukumelana nentlungu, uCerrica wabiza u-9-1-1. Watshela i-dispatcher yintoni eyenzekayo kwaye wayeziva ukuba uCarr uthinteke ekuqhubeni. Ngezinyembezi ezibuhlungu, wachaza ukuba wayeziinyanga eziyisixhenxe ezithwele umntwana kaCarruth. Ngethuba lafika amapolisa, akukho banikrokthi ayifumaneka kwaye i-Adams yaqhutyelwa kwi-Medical Centre yaseCarlon. Waya ngokuhlinzwa ngokukhawuleza kwaye oogqirha bakwazi ukugcina umntwana wakhe umntwana, uChansela Lee, nangona wayeseneminyaka ezili-10 ngaphambi kwexesha.
I-Adams yayixhomekeke ebomini kwaye ngandlela-thile ifumene amandla okubhalwa amanqaku esekelwe ukukhumbula kwakhe iziganeko ezenzeka ngexesha lokudubula.
Kuloo manqaku, wabonisa ukuba uCarruth wayevalile imoto yakhe ukuze akwazi ukusinda iibhola. Wabhala ukuba uCarruth wayekho ngexesha lokuhlaselwa. Ngokusekelwe kumanqaku akhe kunye nobunye ubungqina, amapolisa abamba uCarruth ukuba enze iqhinga lokubulala , ukuzama ukubulala nokudubula kwisithuthi esipheleleyo.
Iintlawulo zitshintsha ukubulala:
Kwakhona wabanjwa ngenxa yokubandakanyeka kulwaphulo-mthetho nguVan Brett Watkins, isenzo sobugebengu; UMichael Kennedy, owayekholelwa ukuba ngumqhubi wemoto; kunye noStanley Abraham, owayehlala kwisihlalo somgibeli ngexesha leemoto. UCarruth wayeyedwa kuphela kwabafundi abane abathumele i-bond yezigidi ezingama-3 zesivumelwano kunye nesivumelwano sokuba ukuba i-Adams okanye umntwana usweleke, uza kubuyela kumapolisa. NgoDisemba 14, u-Adams wafa ngenxa yokulimala kwakhe.
Iimali ezibhekiselele kuzo ezine zashintsha zaze zabulala.
I-Carruth iphuma ngaphandle:
Xa uCarruth efumene ukuba uAdam wafa, wagqiba ekubeni abaleke endaweni yokuziphendulela, njengoko wathenjisiwe. Ama-FBI ama-agent amfumene kwisiqwenga semoto yomhlobo eWilersville, TN. kwaye wambuyisela esitokisini. Kwada kweli nqanaba, i-Panthers yayineCarruth kwikhefu elihlawulwe, kodwa emva kokuba yaba ngumbaleki, bahlukana nabo bonke.
Ulingo lithatha iintsuku ezingama-27 ngobungqina obuvela kumaNgqina angama-72.
Abatshutshisi bathi uCarruth nguye olungiselele ukuba abulale uAdam ngenxa yokuba akafuni ukuhlawula umntwana.
Ukhuseleko luchaza ukuba ukudubula kwaba ngumphumo weengxaki zezilwanyana ukuba uCarrut wayefanele ukuxhaswa ngemali, kodwa wayexhaswe ngaphandle, ngomzuzu wokugqibela.
Ukutshutshiswa kwajika kumanqaku abhaliweyo abhalwe ngeAdam, echaza indlela uCarruth avimbile ngayo imoto yakhe ukuze akwazi ukuphunyuka kwizibhamu. Iirekhodi zefowuni zibonise iifowuni ezenziwe eKarruth zize zikhusele, uKennedy, malunga nexesha lokudubula.
UMichael Kennedy wenqaba ukunyamezela ubungqina bakhe ngoCarruth. Ngethuba lobungqina bakhe, wathi uCarruth wayefuna ukuba i-Adams ifile kangangokuthi akazange ahlawule inkxaso yenkxaso yabantwana. Kwakhona wafakazela ukuba uCarruth wayekuloo ndawo, evimbela imoto yeAdams.
Watkins, umntu osolwa ngokudubula isibhamu, wamkela isicelo sokungqina ngokumelene noCarruth ngokutshintshela ubomi endaweni yesigwebo sokufa. Umtshutshisi akazange ambizele ekumeni ngenxa yesitatimende awasinikela kwisekela lika-sheriff ukuba uCarth akananto akwenzayo ngokubulala.
Uthi uCarruth uxhaswe kwi-drug deal kwaye bamlandela ukuba bathethe naye. Uthe baqhubela kwi-Adams imoto ukuze bafumane apho uCarruth ehamba khona, kwaye i-Adams yenze isenzo esihlazo kubo. UWatkins uthe ulahlekelwe kwaye waqala ukudubula. Ukhuselo lwagqiba ukubiza uWatkins kwisigxina, kodwa uWatkins wayenqaba ukuthetha nantoni na malunga nokusetyenziswa kweziyobisi, ukunamathela kwisivumelwaniso sakhe.
Intombi-ntombi, uCandace Smith, ubungqina bokuthi uCarruth wamkela ukuba wayebandakanyekile ekudutshulweni kodwa akazange akhuphe.
Abantu abangaphezu kwama-25 bangqina ngoCarruth.
UCarruth akazange athathe indawo.
URae Carruth wafunyanwa enetyala lokuzibulala, ukudubula kwisithuthi esipheleleyo kunye nokusebenzisa isixhobo sokutshabalalisa umntwana ongakazalwa waza wagwetywa iminyaka eyi-18-24 entolongweni.
Iindaba zeRae Carruth - I-New York Times
UNicola Tesla - Omkhulu